के हो फिजिकल र केमिकल सनस्क्रिन? :: डा अमृता श्रेष्ठ :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
के हो फिजिकल र केमिकल सनस्क्रिन?
डा अमृता श्रेष्ठ शनिबार, जेठ ७, २०७९, ०७:१७:००
सनस्क्रिन दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा फिजिकल र अर्को केमिकल। फिजिकल सनस्क्रीनले यूभी रेजको (घाममा हुने) किरणलाई छाला भित्र छिर्न दिँदैन।
यो सनस्क्रिन छालाको बाहिरी भागमा बस्छ। केमिकल सनस्क्रिन छाला भित्र पस्छ र स्पोज जस्तै काम गर्छ। फिजिकल सनस्क्रिनले सेतो कणहरु छोड्छ जसले गर्दा गहुँगोरो वर्ण भएको मानिसमा राम्रो देखिँदैन। फिजिकल सनस्क्रिनले एक्दमै छिटो काम गर्छ।
छालामा लगाउने बित्तिकै काम गर्छ तर यसलाई २-३ घण्टापछि फेरि लगाउनु पर्छ। केमिकल सनस्क्रिन घाममा निस्किनु भन्दा २० मिनेट अगाडि लगाउनु पर्दछ। केमिकल सनस्क्रिन लगाउँदा छालाको प्रकारमा ध्यान दिनु पर्छ।
म्याट र टिन्टेड फिजिकल सनस्क्रिनले छालामा सेतो धब्बा छोड्दैन र यसले छालालाई मुलायम बनाउछ।
जिंक ओक्साईड र टाईटेनियम डाईओक्सआइड छ भने त्यो फिजिकल सनस्क्रिन हुन्छ तर एवोवेन्जोन, अक्सिबेन्जोन, अक्टिनोक्सेट र टिनोसोर्व छ भने त्यो केमिकल सनस्क्रिन हो।
टिन्टेड सनस्क्रिन मिनिरल बेस्ड सनस्क्रिन हो। यसमा आइरन अक्साइड वा पिग्मेन्टरी टाईटानियम डाईअक्साइड हुन्छ जसले भिसिब्ल लाइटलाई ब्लक गर्दछ।
चायाँ पोतो आउने र घाममा निस्किने बित्तिकै चाँडै कालो हुने छालाको लागि टिन्टेड सनस्क्रिन एकदमै राम्रो हुन्छ।
(श्रेष्ठ शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरूवा रोग अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छिन्।)